Khabiir Ku Saabsan Sida Loogu Sii Joojiyo Fayraska Trojan
Ku shaqeynta kombiyuutarka leh khibrad Dridingx Trojan waxay noqon kartaa mid aad u xanaaq badan. Trojan waa labadabafaafidda fayruuska iyo fayraska fayrasta ee ku soo galaya kambiyuutarka adigoon rukhsad kuu haysan. Ka dib markii lagu rakibo kombiyuutarkaaga, DridexTrojan waxay qaadataa faa'iido waxayna bilaabmaysaa habka aad u maamusho nidaam aad u xun.
Sida laga soo xigtay Julia Vashneva, khabiir ku ah Sare Adeegyada Digital, Infekshanka fayruska ee Trojan wuxuu heli karaa nooc kasta oo ka mid ah nidaamka daaqadaha. Fayrasta dilaaga ah ee loo yaqaan 'Trojanbeddelidda codsiyada amniga ee la rakibay sida daaqadaha daaqadaha iyo fayruska ka hortagga.
Fayrasku wuxuu helayaa helitaanka codsiyadaada kombiyuutarka adoon lahayn aqoonta ugu dambaysa ee isticmaalaha - logo creator app apk android.Kadib markii lagu rakibo kombuyuutarkaaga, fayruskan wuxuu soo uruurin karaa macluumaad xasaasi ah sida lambarka sirta ah, xisaabtamayaasha, iyo faahfaahinta bangiga.
Sidee Trojan u galaa kombuyutarkaaga
Dridex Trojan waxay ka heli kartaa nidaamka hawlgalka ee emails, halkaasoo lagu keydiyo boosteejada spam.
Fayruska Trojan wuxuu kuugu gudbin karaa kombiyuutarka adiga oo adeegsanaya fareebada USB iyo daroogooyinka la isku qaadsiiyay isla fayraska.
Fayraskan ayaa si ballaaran u faafaya meelo xunxun
Fayraska kombiyuutarka ee Trojan sidoo kale wuxuu kicin karaa kombuyuutarka adiga oo u maraya faylka faylka
Fayruska Dridingx Trojan waa mid waxyeello leh?
Dridex Trojan waa fayras halis ah oo gacanta ku haysa kumbuyuutarka adiga oo aan adiga oo dhanaqoon. Marka lagu faafiyo kombuyuutarkaaga, fayrasku wuxuu waxyeeli karaa PC-gaaga:
Xadida macluumaadkaaga xasaasiga ah sida faahfaahinta bangiga iyo furaha xisaabta
Khatartaada khaaska ah adiga oo macluumaadkaaga xasaasiga ah la wadaagaya shabakadaha khatarta ah
Naafeynta daaqadahaaga daaqadahaaga oo lagu rakibay fayrusyada ka hortagga.
Xoojinta waxqabadka kombiyuutarka guud iyo xawaaraha
Isticmaalayaasha kombiyuutarku waa inay noqdaan kuwo isfahmiya marka loo isticmaalo kombiyuutarada marka lagu xidho internetkaHalkan waa tilmaame habraac ah oo loo adeegsan karo in laga saaro fayruska Trojan ee qalabyada PC iyo Mac.
Dridex Trojan saarista nidaamka hawlgalka Windows
Macaamiisha isticmaalaya daaqadaha OS waxay ka saari karaan fayruska dilaaga ah ee Toogashada iyadoo la isticmaalayo hormarKa-hortagga Argagixisada ama rajo-gelinta. Isticmaalayaasha Mac OS, raadso software amniga ah ee laga helo internetka oo ka saar fayraskan dilaaga ah.
Fayrasta xun ee Trojan waa laga saari karaa kumbuyuutarkaaga gacanta labadabasi toos ah. Si aad uga saarto fayraskaaga PC-gaaga, samee baaritaan buuxa oo raadi faylasha qarsoon. Ka saar dhammaan faylasha diiwaanka ee la xiriiraFayraska Trojan. Waxaad tagtaa guddiga kantaroolka ah iyo uninstall Dridex Trojan ka soo gudubka adiga oo gujinaya Settings Settings.
Waxaad sidoo kale furi kartaa bartaada, waxaad tagtaa faafaahinta, riix ad-on iyo ka saarfayraska si joogto ah. Si aad uga saarto fayruska Dridex Trojan ka daalacashada, dib u dajinta goobaha, iyo fayruska ayaa la daaweyn doonaa.
Dridex Trojan ka saarista qalabka Apple
Dridex Trojan waa barnaamij khaas ah oo ka shaqeeya inuu hoos u dhigo mashiinkaaga.Si aad uga saarto fayruskan foosha ah mashiinkaaga Mac, waxaad soo dejisan kartaa barnaamijka MacBooster ee ku habboon qalabkaaga. Sameeya nidaam buuxascan si loo ogaado jiritaanka wixii fayl ah oo aan la rabin oo ku saabsan Mac. Riix badhanka leh 'xalinta dhibaatooyinka' si aad uga saarto dhamaan hanjabaadaha khatarta ah eewaxaa laga heli karaa mashiinkaaga. Si aad u noqoto mid caqli-gal ah, had iyo jeer tixgelin inaad dooratid xulashada rakibaadda si aad uga fogaato in lagu xiro hanjabaad xaasidnimoPC-gaaga.